Iindaba -Iindima ezine ezibalulekileyo zemifuno efakwe kuloliwe ohamba ngesantya esiphezulu kulwakhiwo lweetonela
Okokuqala, ijelo elingaphambi kokungcwatywa kwetonela lesantya esiphezulu sikaloliwe linokomeleza ulwelwesi olunemigca emibini kwaye ngaxeshanye, linokuba nefuthe lokunyanzelwa kombane, kwaye zininzi izinto ezinamandla ngexesha lenkqubo yamandla. Into ebalulekileyo kukuba namandla afanayo. isiphumo. Inokuphuculwa ekuphenduleni ukudinwa.
Okwesibini, zininzi izibonelelo ezifakwe kwizitishi ezihamba ngesantya esiphezulu. Olunye uphawu kukuba unokumelana nomlilo, oko kukuthi, phantsi kwamaqondo obushushu aphezulu, uhlala ungatshintshi kangako.
Okwesithathu, eyona njongo yomjelo ofakelweyo wetonela yesantya esiphezulu kukukhusela i-catenary ekuweni, ngakumbi ukungavumeli ukuba i-catenary iwele kuloliwe, kungenjalo kuya kudibana uthotho lweengxaki ezinobungozi. Ngokukodwa kwimeko yokuxhoma iikholamu, kufuneka kuqinisekiswe ukufakwa ngokuchanekileyo.
Ukongeza, kwinkqubo yokulungisa ulungelelwaniso lwendandatho, umjelo wangcwatyelwa ijelo ulunge kakhulu.
Kungoku nje ngenxa yezi zibonelelo zokungena kwimibhobho yemibhobho ephuhliswe ngokubanzi kuloliwe welizwe lam okhawulezayo. Ngokuqhubela phambili kwesayensi yezentlalo kunye netekhnoloji, iimfuno zabantu kumgangatho weendlela ezigxunyekwe ngemibhobho ziya ngokuya ziphakama. Ukuba bafuna ukuqhubeka nokuhlangabezana neemfuno zabathengi, abavelisi banemfuno yokusebenza kwemveliso kwinkqubo yokuvelisa imibhobho emiselweyo. Kuphuculo oluqhubekayo, umgangatho kufuneka ulawulwe ngokungqongqo. Ngophando oluqhubekayo kunye nokubuyela umva kwemfuno yentengiso, siphuhlise amajelo afakwe ngaphakathi kwiipaseji ezikhethekileyo zeepayipi zomgaqo kaloliwe ongaphantsi nakwizantya zomgaqo kaloliwe.